Agaasimhii garoonka diyaaradaha Baydhabo oo Muqdisho ku xiran – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada Dowladd Somaliya ay xabsiga u taxaabeen Agaasimihii Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Baydhabo Salaad Mukhtaar (Salaad Jeeri).
Sida aynu ka helyeno wararka, Salaad Jeeri, ayaa waxaa lagu dhex qabtay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, xilli uu qorsheynaayay in uu ka amba baxo.
Masuulkaan, ayaa waxaa lagu xiray toddobaadkii hore Xabsiga Godka Jilacow ee Magaalada Muqdisho, waxaase kolkii dambe loo soo wareejiyay Xabsiga Dhexe ee Xamar.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Salaad Jeeri loo heysto inuu lunsaday hanti Dowladeed, taasina ay ka dambeysay in laamaha ammaanku ay soo xiraan.
Ilaa iyo hadda war rasmi ah kama aynaan soo saarin Dowladda Federalka Somaliya, xariga ka dhanka ah Salaad Jeeri, laakiin waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in lagu hawlan yahay, sidii Maxkamad lagu horkeeni lahaa.
Jeeri waxa uu ka mid yahay ganacsatada waaweyn ee ka soo jeedo Gobolada Koonfur Galbeed ee Somaliya.